घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » पर्यटन » ताल पावेल गायब: पर्यटन को लागी यति दुखी!
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
जलवायु परिवर्तन भर्खरै एक वास्तविकता बन्यो र लेक पावेल मा पर्यटन उद्योग को लागी एक ठूलो मुद्दा, एरिजोना र यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबैभन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट क्षेत्र को एक।
जलवायु परिवर्तन एरिजोना र यूटा मा लेवल पावेल संग समस्या मा वास्तविक भएको छ
लेक पावेल मा पानी को लाइन एक ऐतिहासिक कम मा गिराएको छ, स्थानीय उद्योग मा एक भारी टोल लिईरहेको छ
लेक पावेल यूटा र एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका मा कोलोराडो नदी मा एक मानव निर्मित जलाशय हो। यो एक प्रमुख छुट्टी ठाउँ लगभग दुई लाख मानिसहरु द्वारा प्रत्येक बर्ष भ्रमण गरीएको छ।
यो अझै पनी घोषणा हो लेक पावेल पर्यटन वेबसाइट:
हामी पाभेल ताल मा पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्न को लागी उत्साहित छौं र हामी तपाइँको यात्रा को लागी तत्पर छौं। कृपया हाम्रो अपरेशन र सेवाहरु मा परिवर्तन को बारे मा अपडेट जानकारी पाउनुहोस् जब हामी पुन: खोल्छौं।
स्वास्थ्य र आगन्तुकहरु, कर्मचारीहरु, स्वयंसेवकहरु, र ताल पावेल मा साझेदारहरुको सुरक्षा हाम्रो नम्बर एक प्राथमिकता हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवा (NPS) संघीय, राज्य, र स्थानीय अधिकारीहरु संग सेवा-व्यापी काम गरीरहेको छ हाम्रा पाहुनाहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागी र सबैभन्दा अपडेट गरिएको स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरु को पालन गर्न को लागी।
मौसम को स्थिति बढ्दो तातो र सुख्खा हुदैछ र आगो को खतरा दैनिक बढ्दै छ। आगलागीको खतरा बढेको बेला आगन्तुकहरुले सार्वजनिक जग्गामा पुनः सावधानी अपनाउनु पर्छ।
आगोको प्रतिबन्ध बढ्दो आगो को खतरा र सम्भावित खतरनाक आगो को स्थिति मा मानव-कारण जंगल आगो को रोकथाम को आवश्यकता को कारण हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा को बढावा दिन को लागी, र संसाधनहरु को रक्षा गर्न को लागी। फायर फाइटर र सार्वजनिक सुरक्षा जंगलको आगो को मौसममा सर्वोच्च प्राथमिकता रहन्छ।
एरिजोना र यूटा मा अन्य सार्वजनिक भूमि मा आगो प्रतिबन्ध को बारे मा अधिक जान्न को लागी, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् www.wildlandfire.az.gov र www.utahfireinfo.gov। देश भर मा जंगल आगो को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, भ्रमण गर्नुहोस् inciweb.nwcg.org.
यहाँ वास्तविकता छ:
ताल पावेल उत्तरी एरिजोना मा स्थित छ र दक्षिणी यूटा मा फैलिएको छ। यो ग्लेन घाटी राष्ट्रिय मनोरन्जन क्षेत्र मा कोलोराडो नदी को हिस्सा हो। लगभग २,००० माईल को तटरेखा, अन्तहीन घाम, तातो पानी, उत्तम मौसम, र पश्चिम मा सबैभन्दा शानदार दृश्यहरु को केहि संग, लेक पावेल परम खेल मैदान हो। एक हाउसबोट भाडामा लिनुहोस्, हाम्रो क्याम्पग्राउन्डमा रहनुहोस्, वा हाम्रो आवासको आनन्द लिनुहोस् र एक निर्देशित अभियान मा हप।
राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवाले अचानक यस महिनाको शुरुमा घोषणा गर्यो कि हाउसबोट अब उप्रान्त Wahweap लन्च र्‍याम्प, क्षेत्र को सबैभन्दा व्यस्त डु boat्गा प्रक्षेपण साइट को उपयोग गर्न सक्दैन। डुats्गा पहिले नै पानीमा फ्याँकिएको थियो उनीहरु लाई चेतावनी दिईयो कि उनीहरु लाई एक हप्ता भन्दा कम समय मा जमिन मा फर्कन को लागी वा डुब्न को लागी जोखिम छ।
पृष्ठ को सानो शहर 7,500 को जनसंख्या छ र हाउसबोट बिना, पर्यटन उद्योग धेरै छैन कि यो सानो जीवन्त शहर चलिरहेको राख्न सक्छ। यो पृष्ठ समुदाय को लागी एक संकट हो।
जबकि जलवायु परिवर्तनले यस गर्मी मा जंगली आगो, तातो लहरहरु, र फ्लैश बाढी लाई बढाएको छ, यसले पर्यटन उद्योग मा एक भारी टोल लिइरहेको छ जुन पावेल ताल मा निर्भर छ। गत हप्ता पानीको लाइन ३५५४ फीटको ऐतिहासिक तल्लो तहमा पुग्यो, जुन १ 3,554 since since पछि देखिएको छैन जब जलाशय पहिलो पटक भरिएको थियो। विशाल जलाशय हाल तीन-चौथाई खाली छ र कोलोराडो नदी बेसिन मा रेकर्ड कम हिमपात को स्तर को कारण कम्तीमा अर्को वसन्त सम्म गिरावट जारी रहनेछ।
लेक पावेल मा सात सार्वजनिक डु launch्गा प्रक्षेपण रैंपहरु मध्ये, दक्षिणी यूटा मा मात्र बुलफ्रोग भर्खरै रैम्प विस्तार को एक श्रृंखला को कारण विश्वसनीय ढंगले कार्यात्मक रहन्छ। तर त्यो पनि चाँडै दुर्गम हुन सक्छ।
यूके स्थित गार्डियन पेपर मा एक रिपोर्ट अनुसार, यूएस ब्यूरो अफ रेक्लेमेशन ले Pow%% सम्भावना रहेको छ कि लेक पावेल वर्तमान ऐतिहासिक तल्लो "अर्को बर्ष" बाट २ ft फिट तल झर्ने सम्भावना छ।
एक राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवा को रिपोर्ट अनुसार, ग्लेन क्यान्यन मा ४.४ मिलियन आगन्तुकहरु २०१ in मा थिए, यो देश मा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको पार्क मध्ये एक बनाउन। आगन्तुकहरु पृष्ठ र वरपरको क्षेत्र मा $ 4.4m खर्च गरीयो र 2019 रोजगार को समर्थन, नजिकैको Navajo राष्ट्र को लागी रोजगार को एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान सहित।
त्यहाँ साइड घाटी मा अन्य मनोरन्जन को अवसरहरु को लागी विशाल संभावना छ कि लेक पावेल बाट बाहिर आउँछ।
नौकायन उद्योग सहमत छ कि ग्लेन घाटी मा नयाँ सुलभ प्राकृतिक क्षेत्रहरु पर्यटकहरु को लागी एक ठूलो आकर्षित हो।